(ကရာတေး မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အမေရိကသို့ ကရာတေးပညာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပုံ။ ။အိုကီနာဝါနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံပင်မကျွန်းတွင် ကာရာတေး ပညာသင်သွားကြသော အမေရိကန်စစ်သားများ က မိမိတို့နိုင်ငံသို့ပြန်ပြီးနောက်၊ လေ့ကျင့်ကွင်းဖွင့်က သင်ပေးခြင်းဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကရာတေးပညာ ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။ ပထမဦးဆုံး ကရာတေးဆရာမှာ အများက “ အမေရိကန် ကရာတေးဖခင်ကြီး ” ဟုခေါ်ကြသော ရောဘတ် ထရီအတ်စ် (၁၉၂၃-၁၉၈၉)ဖြစ်သည်။ ထရီအတ်စ် သည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်း ဆော်လမွန်ကျွန်းတွင် အိုကီနာဝါကျွန်းသား ကာရာတေးပညာရှင် မိုတိုဘု ချိုးကိ ၏ တပည့်ဖြစ်သော တရုပ်လူမျိုးတစ်ယောက်ထံမှ သင်ယူခဲ့သည်။ ၁၉၄၂ခုနှစ်တွင် အာရီဇိုးနားပြည်နယ် ဖီးနစ်စ် ကရာတေးလေ့ကျင့်ကွင်း ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း မည်သူက ကရာတေးကို အမေရိကသို့ ပထမဦးဆုံး မိတ်ဆက်ခဲ့သည်ကိုမူ အခြားအဆိုများလည်းရှိ၍ ယနေ့တိုင် အငြင်းပွားနေကြဆဲဖြစ်သည်။
ဆရာကြီး ဖူနာ့ကိုရှိ၊ ဂိချင်း ၏ ကရာတေးအမှန်တရား Archived 26 October 2013 at the Wayback Machine.
ကရာတေးဒို အမှန်တရား Archived 21 August 2013 at the Wayback Machine.
↑ Centripetal Acceleration | What is Centripetal Acceleration? | Physics@TutorCircle.com။ 20 April 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 31 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Another Way: the way of non-tension, relaxation in Karate-do။5September 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The science of punching harder: why is speed more important than mass? (And why having the force won't help you)။ 26 February 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၆.၀ ၂၆.၁ http://www.knowledgerush.com/kr/jsp/db/board.jsp?id=77471[လင့်ခ်သေ]
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။6January 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၅.၀ ၃၅.၁ ၃၅.၂ http://www.knowledgerush.com/kr/jsp/db/board.jsp?id=76999[လင့်ခ်သေ]
↑ ၃၈.၀ ၃၈.၁ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 21 August 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ホーム - JKA 公益社団法人日本空手協会။ 25 November 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄၂.၀ ၄၂.၁ ホーム - JKA 公益社団法人日本空手協会။7April 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 28 January 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Aiki-Kuzushi။ 19 February 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄၇.၀ ၄၇.၁ Description of Karate-do (Budo)။ 26 October 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။5March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅၁.၀ ၅၁.၁ ၅၁.၂ Kyokushin Myanmar။ 19 November 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 14 February 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
http://ikomyanmar.com/ikomyanmar.htm Archived 22 May 2013 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကရာတေးဒို&oldid=654924" မှ ရယူရန်
၁၅ မေ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ မေ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။